Isiqalo sokuqala: (noma ungayenza kanjani i-kde iqale ngemizuzwana emi-3) | Kusuka kuLinux
Isiqalo sokuqala uhlelo olusetshenziswayo ukwenza izinhlelo zivuleke ngokushesha. Yize incazelo yokuthi ingayifanele kanjani i-athikili ephelele, singasho ngendlela enokhahlo ukuthi itshela kanambambili ukuthi iqale ibheke kuphi imitapo yolwazi enamandla edinga ukuyilayisha.
Ngakho-ke, ake sicabange ukuthi sine-kanambambili encike kumtapo wezincwadi we-QtCore, uma sesenze i-prelink kuyo, izosesha kuqala esikhaleni esinqunyelwe i-prelink, futhi uma ingayitholi (isibuyekezo, se isibonelo) izoyifuna ngendlela yendabuko.
I-Prelink isebenza kunoma yiluphi uhlelo oluhambisana ne-POSIX, njenge-GNU / linux noma ama-BSD.
1 Ungasifaka kanjani isicelo se-prelink
2 Lungiselela i-KDE
3 I-Cron ne-prelink
Ungasifaka kanjani isicelo se-prelink
Ukuthuthukisa uhlelo nge-prelink kulula, singakwazi ukwengeza kanambambili sisebenzisa (njengezimpande):
Kepha ukwenza lonke uhlelo lusebenze kahle:
Nayi incazelo eningiliziwe yencazelo yamapharamitha:
a: kulingana- konke, kwenza ukuthi isebenze kulo lonke uhlelo
m: ilingana ne-memory-memory, incazelo yokuthi isebenza kanjani iyinkimbinkimbi, kepha igcina isikhala
v: okulingana ne -verbose, kusivumela ukuthi sazi ukuthi yimiphi imitapo yolwazi exhunywe ngaphambili
IMP: Ilingana nokungahleliwe, khulisa ukuphepha ngokwenza inani lingahleliwe. Angiyazi imininingwane yokusebenza kwayo
Isiginali yiYakuake, uma ngabe noma ngubani enentshisekelo.
Ukuze un-pre-link (unlink) kanambambili
Ukusatshalaliswa okuningi okufana no-Ubuntu kunikela nge-cron evame ukuxhumanisa kuqala wonke ama-binaries wesistimu uma i-prelink ifakiwe
I-Prelink ingadala izinkinga kumabhanari amaningi okuphathelene, ngakho-ke imvamisa yeqiwa ngokuzenzakalela. Noma kunjalo, qiniseka ukuthi ifayela lakho le /etc/prelink.conf liqukethe le migqa:
# Skype -b / usr / lib32 / skype / skype -b / usr / lib / skype / skype # Flash Player Plugin -b /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so # NVIDIA -b / usr / lib / libGL .so * -b / usr/lib32/libGL.so* -b //usr/lib/libOpenCL.so* -b //usr/lib32/libOpenCL.so* -b / usr / lib32 / vdpau / -b / usr / lib / vdpau / -b / usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so -b /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so* -b / usr / lib / libnvidia- * - b / usr / lib32 / libnvidia- * # Catalyst -b / usr / lib / libati * -b / usr / lib / fglrx * -b / usr / lib / libAMDXvBA * -b / usr/lib/libGL.so* - b / usr / lib / libfglrx * -b / usr/lib/xorg/modules/dri/fglrx_dri.so -b /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so -b / usr / lib / xorg / amamojula / izandiso / fglrx / -b / usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so -b /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
Okuthenjiswayo yisikweletu. Ukube ubusuxhume ngaphambili uhlelo lwakho kungenzeka awubonanga mehluko ezikhathini zokulayisha ze-KDE. Lokhu kungenxa yokuthi i-KDE isebenza njengensiza ebizwa ngokuthi i-kdeinit ukulayisha yonke imitapo yolwazi edingekayo. Ukugwema ukusebenzisa leli thuluzi kumele sazise i-KDE ukuthi ixhunywe ngaphambili. Ukuze senze lokhu kufanele (njengezimpande) senze ifayela eliguqukayo:
Esinamathisela kuyo umugqa olandelayo
Futhi siyinikeza izimvume ezifanele (asifuni noma yimuphi ogangile ukungeza rm-rf /)
Futhi uma ungangikholwa, nansi ividiyo yeKDE iqalisa uhlelo lwami:
[imininingwane] Imininingwane yohlelo:
I-HDD ku-7200 RPM
I-Ksplash ikhutshaziwe (imbangela yesikrini esimnyama sevidiyo
Uma usebenzisa uhlelo olufana ne-Archlinux, lapho ukuvuselelwa kuvame kakhulu, kungahle kube nentshisekelo ukufaka i-cron esebenzisa i-prelink nsuku zonke.
Ngakho-ke, sivula ifayela le-cron nge-nano (njengezimpande):
Futhi sinamathisela okulandelayo:
Ngemuva kwalokho siyinikeza izimvume ezifanele (sengivele ngishilo ukuthi akekho umuntu ofuna umuntu ongeze ikhodi enonya):
Umkhuba omuhle lapho ufunda i-athikili ukucwaninga lokho okwenziwa ngumbhalo uqobo. Umkhuba omuhle uma uyibhala ukuchaza ukuthi wenzeleni. Lapha ukuwohloka
Ulayini wokuqala ukutshela isistimu ukuthi iyini i-bash script nendawo yetolika.
Eyesibili yenza i-bash ikhiphe isifinyezo kumodi yokulungisa iphutha, angazi ukuthi kungani, kepha kuyanconywa, kungaqedwa ngaphandle kwengozi. I && isho ukuthi uma umyalo uqeda, sebenzisa okulandelayo.
Yenza i-prelink neminye imingcele esivele ichaziwe, i- &> / dev / null iqondisa kabusha noma yikuphi okukhiphayo ku / dev / null, okungukuthi, iyakulahla
Prelink amakhasi wamadoda
Imibhalo yeRed Hat (umbhali wokuqala) incazelo yezobuchwepheshe ku-PDF.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-Prelink (noma ungayenza kanjani i-KDE boot ngemizuzwana emi-3)
Nge "siteleka" osinikeze u- [ENTER], okuncane okuncane okwenziwe i-pc yethukile futhi kwaqala ukusebenza ngejubane eliphindwe kabili laphambilini, uthi sebenzisa i-PRELINK, kepha uhlelo lwakho lususelwa kokwesaba ... hahaha!
Ukubingelela nokuthunyelwe okuhle
Umm, ngomsindo owenzayo angimangali uma bekukhona imayini kukhompyutha yami ye-XD.
I-Epic ihlaya, kuyiqiniso ukuthi ubelangazelela ukungena, hehe.
Ngingathanda ukuphawula ukuthi esikhashaneni esedlule bengikubeka uphawu lokhu, futhi ngibona ukuthi umehluko ubucishe bungekho (sebenzisa njengezivivinyo engicabanga ukuthi bese ucwilisa izingcezwana ze-firefox ne-nautilus).
Uma kukhona abanentshisekelo ngizolishicilela ifayela (angizange ngilishicilele ngaleso sikhathi sobuvila).
Umm, akuwona wonke amafayela angabonakala ethuthuka, kepha okungenani uhlelo luvame ukuqala ngokushesha.
Kunesikhathi lapho bengisebenzisa khona i-e4rat futhi ithuthukise ukuqalisa imizuzwana embalwa, ngoba iyi-hdd iqala ngokushesha okukhulu kulokho engikubonayo, njengamanje ngine-ssd encane enama-kaos nakuma-xfs nalapho ngibona ukuqala khona isikhathi angizange ngikukholwe.
Ngifuna ukwazi itimu yedeskithophu oyisebenzisayo nesethi yesithonjana (kuma-vibes amahle)
Ngingafunga ukuthi isihloko sithi helium.
Ingqikithi ye-plasma nezimpawu kubizwa nge-Dynamo kanye ne-Next thin window.
Uxolo kumbhali wengoma ye-off 🙂
Sibizwa kanjani leso siqalisi sohlelo lokusebenza? 🙂
Ngicabanga ukuthi ibizwa ngokuthi isiqalisi esilula se-qml.
Njengoba umgwaqo esho, yi-QML
Ithiphu enhle kakhulu, noma ngabe i-KDE isebenzisa izimangaliso ku-Arch naku-Slackware (ngizizamile futhi ziyamangalisa ngempela).
Ngiyabonga kakhulu. Ngikuhlolile ku-Arch yami, ngenza i-prelink ejwayelekile futhi kufanele ngithi ukuthuthuka kuhle impela futhi ngizizwa ngikhululekile hehe
Angazi noma yimi…. kepha angiwuboni umehluko futhi ngokuhlaziywa kwesistimu kusathatha isikhathi eside ukuqala ...
Yebo, kufanele kube nenkinga ethile ku-OS yakho, uyazi, i-prelink -au nakho konke okuxazululiwe.
Ngokwazi kwami ​​(ngokwami ​​ukubona), okungenani kwi-Gentoo awudingi ukudala ifayili elisha ukuze udlulise inani le-KDE_IS_PRELINKED variable. Vele ungahambisi umugqa KDE_IS_PRELINKED = 1 ku /etc/env.d/43kdepaths (anginasiqiniseko sokuthi leyo yindlela eqondile yini, ngoba anginawo umshini wami okwamanje).
Njalo lapho i-KDE ihlanganiswe ngokuphelele, kufanele uhlole lelo fayela, njengoba amanye amaphakheji eliwafakayo azobhala ngaphezulu ifayela engikhulume ngalo.
Futhi kungenzeka kusakazwa okuningi. kepha ukukwenza ngendlela engikwenze ngayo ngiyaqinisekisa ukuthi lokhu kulungiselelwa akushintshiwe.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, Halala
Ngiphakamisa ukuthi udale okokufundisa ukufaka i-Gentoo
Ngizokugcina engqondweni. Ngiyabonga
ukusetshenziswa okuhle kakhulu, yize kungangisebenzisi, ngoba ngine: enyanyekayo ku-KDE
Ingabe ihlengethwa lizoshesha? Bekulokhu kubonakala kuphuza ukuqala
Kufanele, angazi, ngihlala ngiyisebenzisa ngokuzenzakalela. Ngisebenzisa i-gentoo, i-portage, uma ithola ukuthi i-prelink ifakiwe, izixhuma ngokuzenzakalela ama-binaries, ngakho-ke, awazi mqondo.
PD- Library = Umtapo Wezincwadi, hhayi umtapo wolwazi 😉
Yebo, ideskithophu ibizwa ngePlasma Desktop, hhayi i-KDE. Kulungile, ngiyamisa i-xD
Ku-jargon yekhompyutha ukwehluleka okwamukelekayo, ngemuva kwakho konke, izilimi ziyi-pragmatic, ikakhulukazi ekuhumusheni.
kuhle. Bengizoyivivinya ku-ArchLinux KDE (isisekelo, hhayi i-DE ephelele) futhi inginika «Iphutha lokulondoloza '/etc/cron.daily/ Iphutha lokulondoloza' /etc/cron.daily/prelink ': Ifayela le-prelink noma umkhombandlela ayikho ': Ifayela noma umkhombandlela awukho ». Anginayo i- "cron" efakiwe futhi kwi-wiki  bakhuluma nge-cronie, i-fcron nokunye okuhlukile. Yini engidinga ukuyifaka noma ukuyenza ukuqedela okokufundisa?
Isakhiwo sencwadi neScribus [Ingxenye yokuqala]
<º Gamer: Ukusetha i-Counter Strike server (nabanye)